Kolombià: Angatahan’ny Filoha Ny Vahoaka Hanome Vaovao Momba Ny Heloka Bevava · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2017 2:56 GMT
Tamin'ny faran'ny Janoary 2010, imbetsaka ny filoha Álvaro Uribe no nanipika ny maha-zavadehibe ny fiampangàna ireo heloka feno herisetra [esp]. Fa indrindra indrindra, niantso ireo mpianatra eny amin'ireo anjerimanontolo ao Medellin sy ireo mpamily fiarakaretsaka ao Cali izy mba ho lasa manome vaovao azo raisina. Nanokatra adihevitra nanerana ny firenena ireny fanambaràna ireny, ary marobe ireo fanehoankevitra hita tety anaty aterineto. Naroso io sosokevitra io noho i Kolombià misedra fitomboana be amin'ny resaka heloka feno herisetra. Ao Medellin, tafahoatra ny avo roa heny ny isan'ny famonoana olona tamin'ny 2009, raha ampitahaina amin'ny tatitra herintaona talohan'io. Tanàna marobe ao amin'ny firenena no miatrika olana amin'ny fitandroana ny filaminam-bahoaka.
Xady avy ao amin'ny bilaogy Expresáte mitantara [esp], fa tsy ela izay, nofoanany sy ireo namany ny lalao baolina kitra iray nokarakarain'izy ireo tao amin'ny tanàna iray ao Medellin, satria natahotra momba ny ainy izy ireo :
Valo andro lasa izay, naintso ahy ireo akàma :
• Araka izany dia amin'ny 4 tolakandro izany satria tsy afaka miala aloha ny sasany.
• Mety izany, miomana aho dia miakatra manabontsina ny baolina.
Fahefatradiny taorian'izay, nisy olona niantso ahy nampitandrina mba tsy hivoaka ny trano fa hafanafàna ny toedraharaha, ary mazava loatra fa marina mandrakariva ny an'ireo loharano azo antoka. Dimy minitra taorian'ilay antso, nanao dingana vitsivitsy handeha hivoaka aho ary teo anoloan'ny tranoko..
• Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan ! Lasa izao ary dia hifampitazana isika hoe iza no iza, hoy ny olona iray mitàna fitaovampiadiana.
• Pan, pan, pan, pan ! no nasetrin'ny ankilany.
Ny sosokevitry ny filoha Uribe dia tohin'ilay fandaharanasa fanajàna ireo fepetran'ny fiaraha-miaina [esp] sy ny zavamisy hoe ilaina io fanomezana vaovao io mba hahafahan'ny polisy mampihena ny isan'ireo heloka feno herisetra manjo ny mpianatra. Tsara marihana: ny hevitra naroson'i Alvaro Uribe dia narahany fanomezana tamby. 100.000 pesos Kolombiàna (eo amin'ny 50 dolara amerikàna ao) isambolana ho an'ireo mpanome vaovao.
Ao amin'ny bilaogy Havladdorías, Vladdo manoratra hoe [esp]:
Efa betsaka ireo mpandalina sy mpampita vaovao no nifantoka sahady tamin'io olana mivaivay momba ny mpanome vaovao izay tadiavin'ny fanjakàna hokaramaina io. Ny famerenana indray ny adihevitra momba ireo olana ateraky ny famadihana ny olompirenena ho lasa andianà mpitsikilo dia mamerina indray ilay hirahira efa noventesina in'arivo.
Ny sasany miahiahy te-hahafantatra momba ny hoe sao ho tandindonin-doza ireo mpianatra amin'ny fanomezany vaovao, na noho ny kalitaon'ilay vaovao nampitainy. Paloma Valencia ao amin'ilay bilaogy amin'ny teny espaniola, El Diario del Huila, nanoratra hoe :
Eo ny tahotra ny hisian'ny hoe “fanaovana ho toy ny devoly” ireo profesora sy ireo namana, ka eo indrindra, tsy maintsy avahana ny fanomezana vaovao sy ny fomba hampiasan'ireo manampahefana azy. Ilaina ny tokony hametrahana dingana fanamarinana.
Antom-pisian'ireo fanehoankevitra marobe ilay fanambaràn'ny filoha, ohatra, tao amin'ny Twitter, toy ny an'i Mauricio Mosquera (@mauromosquera), izay manoratra hoe misy fomba tsaratsara kokoa azo ampiasàna io vola io:
100 000 pesos isambolana ho an'ireo mpianatra tsy banga tamin'ny fanarahana fampianarana !!!!!!!!!!
« Toy ny misy zavatra milaza amiko fa miasa ho an'ny fanjakàna i MaPis », sary fanaingoana an'i Xtian nahazoana alàlana avy aminy.
Angatahan'ny filoha Uribe ihany koa ireo 31.000 mpamily fiarakaretsaka ao an-tanànan'i Cali, izay tena anjakan'ny heloka feno herisetra tokoa, mba ho lasa mpanome vaovao. Ny tranonkala an'ny W. Radiodia nametraka sehatra ahafahana miresaka ety anaty aterineto, amin'ny teny espaniola, ka ao ireo olompirenena dia afaka mamaly fanontaniana hoe : ahoana no hevitrao momba ilay sosokevitry ny filoha Uribe hampiasa ireo mpamily fiarakaretsaka ao Cali ho toy ny mpanome vaovao ?
152 Alexa | 02/03/10 06:37:03 manoratra fa :
Ho ahy dia toa hevitra tsara izany. Adidin'ny olompirenena rehetra eto amin'ny firenena ny manome vaovao ny manampahefana momba ireo fandikandalàna, ny firenena izay isanandro isanandro no mitombo ny fandikandalàna misy, ary noho ny tahotra valifaty mety hanjo ireo olona akaiky antsika dia matetika isika no voatery manakombona ny vavantsika aminà zavatra marobe izay hitantsika sy fantatsika.
139 Castro | 02/02/10 17:57:39 manoratra hoe :
Izany ve no fahalemana demaokratika ? Afaka mba mieritreritra ny fanabeazana ry zareo fa tsy izany. Mila olona manana fijery midadasika ny firenena, eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, mba tsy ho anaty herisetra ho hiafaran'ny zavatra rehetra, ary eo amin'ny sehatry ny asa satria marobe no tsy misy atao.
Vladdo manazava, amin'ny teny espaniola, ny antony iheverany hoe hevitra diso ilay sosokevitry ny filoha:
Tonga amin'ny faratampony ilay sosokevitry ny filoha, ka na dia ireo mpanohana azy aza nivanàka, na farafaharatsiny gaga, tamin'ilay hevitra tokana hampiasàna ny mpianatra ao Medellin sy ireo mpamily fiarakaretsaka ho toy ny mpanome vaovao. Dia iza koa no manaraka ? Ireo mpivarotra tapakila filokàna ao Pasto, ireo mpanao asa tànana ao Leticia na ireo mpivarotra mandehandeha ao Bogotà ve ? Tsy misy dikany ny tohankevitra hoe izay tsy manome vaovao dia mpiray tsikombakomba amin'ny fitomboan'ny heloka bevava any amin'ireny tanàna ireny (zavamisy azo nojerena nialoha taorian'ny dingana iray nanahirana nikatsahana fandriampahalemana ary ilay noheverina ho fanesorana ireo milisin'ny Fiarovantena mitambatra tao Kolombià).